KongoLisolo "KL" Na okwu achoro bu akuko edeputara maka ebum n’obi ichikota umu nwoke na umu nwanyi nile nke ndi Africa. KongoLisolo na-emeghe ndị mmadụ site na ụdị ndụ niile, na-enye ohere ịkekọrịta echiche, ịmekọrịta echiche iji nweta ọzụzụ onwe onye dabara na ahụmahụ nke ndị ọzọ.
Ihe kpatara aha KONGOLISOLO ?
KONGO: singifie "Ịhụnanya" - nwekwara otu "Ọkpụkpụ nke ụmụ mmadụ" & "Ndị mmadụ tam na agụ owuru"
lisolo : n'aka “Nkata”. Ya mere, ka anyị kwuo ndị Black / Africa!
KongoLisolo na-agba ume "ỤLỌ NKE MGBE" Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, aro na ịchọrọ ịkọrọ anyị, ị nwere ike iziga ha na: kpọtụrụ @kongolisolo.co
Nọvemba 26 10: 20